थाहा खबर: नेकपाभित्र सभामुखको सकसः अनिर्णयको बन्दी बन्दै संसद
नेतासामू दुई विकल्प : सभामुख छोड्ने या तुम्बाहाङ्फे रोज्‍ने ?
काठमाडौँः सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सभामुख चयन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। आन्तरिक किचलो बढ्दा नेकपाले अहिलेसम्म रिक्त पदमा सभामुख चयन गर्न सकेको छैन, जसकारण संसद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको हो।
सत्तासीन दल नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीच सभामुख चयनमा कुरा नमिलेपछि संसदको बैठक बस्‍न सकेको छैन। तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा जेलपरेपछि नेकपाभित्र सभामुख चयन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटै पार्टीले सभामुख र उपसभामुख बनाउन पाउँदैन। नेकपाले अहिले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने कसरत गरिरहेको छ। तर, तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूलाई नै सभामुख बनाउने सुनिश्चतता दिलाएमात्रै राजीनामा दिने तुम्बाहाङ्फेको शर्त छ।
'स‌ंविधान कार्यान्वयनका लागि म राजीनामा दिन तयार छु, तर पार्टीले सभामुख चयन नगरेकै कारण मैले राजीनामा दिने कुरा हुँदैन,' तुम्बाहाङ्फेले भन्छिन्‌,'सभामुख चयन गरिन्छ भने लगत्तै म राजीनामा दिन्छु, तर रिक्त सभामुख पदमा उपसभामुखको हैसियतले मेरो स्वाभाविक दाबी रहन्छ।' संविधानअनुसार पनि सभामुख नभएको अवस्थाले राजीनामा दिएर आफूले संसदको नेतृत्व रिक्त पार्न नमिल्ने तुम्बाहाङ्फेले बताइरहेकी छिन्‌।
उपसभामुखले नै सभामुख पदमा दाबी गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेका छन्‌। पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले चाहिं स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन अघि सारेका छन्‌। साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा सभामुख पद माओवादी खेमाले नै लिएको थियो। अहिले पनि आफूहरुले नै सभामुख पद पाउनुपर्ने पूर्वमाओवादी अडानका बीच साे खेमाबाट देव गुरुङ र पम्फा भूसाललगायतका आकांक्षी देखिएका छन्‌।
ओली दाहालको छलफल असफल
सभामुख चयनको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच पटक-पटक छलफल भइसकेको छ। तर दुवै नेताले आ–आफ्नो अडान राख्दा सभामुख चयन पेचिलो बन्दैछ। ओलीले नेम्बाङ र अध्यक्ष दाहालले सापकोटालाई च्यापिरहेका छन्‌।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीबाहेकका प्रमुख नेताहरुबीच संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतमको निवासमा भएको भेलाले पनि ओली दाहालबीच थप असमझदारी पैदा गराएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहमतिमै बैठक बसेको नेताहरुले जिकिर गरेपनि ओलीले भने नेताहरुको जमघटप्रति असतुष्टि जनाइसकेका छन्।
के पाक्दैछ बालुवाटारमा?
शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने निर्णय गर्‍यो। सचिवालयको निर्णय आफुले नमान्‍ने अडान राखेपछि आइतबार बिहानैदेखि ओली र दाहाल शीर्ष नेताहरुलाई लिएर छलफलका लागि बालुवाटारमा बसे।
ओली र दाहालले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे। तर, उनले पुरानै अडान दोहोर्‍याइन्। उनी दुई पटक स्थगित भइसकेको संसद बैठकलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा थिइन्। ओली र दाहालसँगको छलफल पनि सभामुख चयनको टुङ्गोमा पुग्‍न नसकेपछि तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भयो।
ओली र दाहालसामू उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि सभामुख चयन संकटमा परेको छ। स्रोतका अनुसार उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले ओली र प्रचण्डलाई ‘म कुनै पनि हालमा उपसभामुखबाट राजीनामा दिन्‍न, सक्नुहुन्छ भने महाअभियाग लगाएर हटाउनुहोस्’ भनेकी थिइन्‌।
यद्यपी, उपसभामुख तुम्बाहाङफेले भनेजस्तै महाअभियोग लगाएर नेकपाले हटाउनसक्ने अवस्ठा छैन। तर उनले अडान कायमै राखिरहे समानुपातिक सांसद तुम्बाहाङ्फेलाई त्यहाँबाट पनि पार्टीले हटाउन सक्ने नेताहरु बताउँछन्‌। सभामुख चयनपछि गरेपछि राजीनामा दिने भनेमा आफूले सोच्‍नसक्ने जवाफ दिएकी तुम्बाहाङ्फेले दबाब कायम गरेरै भएपनि सभामुख पद आफैंले लिने मनस्थितिमा छिन्‌, तर ओली–दाहालले आफ्नै पक्षका व्यक्तिको दाबेदारी देखाइरहेका छन्‌।
पार्टीले सभामुख चयनलाई नटुङ्ग्याए उपसभामुख तुम्बाहाङ्‌फेले संसद बैठक आफैंले चलाउने चेतावनी दिइरहेकी छन्। उपसभामुखले संसदको बैठक सञ्‍चालन गरेको अवस्थामा नेकपाले सभामुख पद गुमाउन बाध्य हुन्छ। त्यसैले नेकपाले सभामुखमा तुम्बाहाङ्फेलाई नै सिफारिस गर्नुको विकल्प नभएको जानकारहरु बताउँछन्‌।
बन्धक बन्दै संसद
सभामुख चयनको बिषयलाई लिएर नेकपाभित्र तीन शक्तिबीच भित्री लडाईं चलिरहेको छ। यही लडाईंले प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत बस्‍न सकेको छैन। राष्ट्रपतिले पुस ४ गतेका लागि संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकेकी थिइन्‌। पौष ४ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन ११ गतेसम्मको लागि स्थगित भयो। १६ गतेबाट पौषको २६ गतेसम्मको लागि पुनः बैठक स्थगित गरियो।
यता, नेकपा सभामुख चयनको बिषयमा वार्तामै थियो। ११ गतेपछि पुनः १६ गतेसम्मको लागि सूचना टाँसेर स्थगित भयो। तर, नेकपाभित्रको विवाद अनिर्णीत नै रह्यो। त्यसैले फेरि माघ ६ गतेसम्मका संसद सचिवालयले सूचना टाँस गररे स्थगित भएको सुचना जारी गर्‍यो। चार महिनादेखि रिक्त सभामुख चयनबारे बिषयमा निर्णय लिन नसक्दा पटक-पटक संसदको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ।
नेकपाको आन्तरिक विवादको कारणले संसदको बैठक स्थगित हुँदै आएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादीलगायतका पार्टीले त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्‌।
तुम्बाहाङ्‌फेका पक्षमा महिला नेतृ
सभामुखको लागि दाबी गरिहेकी तुम्बाहाङ्फेको पक्षमा महिला नेतृहरुले समेत आवाज उठाउन थालेका छन्। विधावारिधी समेत गरेकी तुम्बाहाङ्‌फेले यसअघि पार्टीकै भातृसंगठन अखिलको नेतृत्व गरिसकेकी छिन्‌ भने कानूनी व्यवसाय समेत गरेकी छिन्‌। शैक्षिक र कानूनी हिसाबले समेत अब्बल रहेकीले तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख दिनुपर्ने नेकपाकी सांसद नवीना लामा बताउँछिन्‌। भालेवादी चिन्तन हाबी भएको कारण महिलाहरु नेतृत्वमा पुग्‍न नसकेको लामाको तर्क छ।